यो वर्षको दसैंलाई ४० अर्ब नयाँ नोट ! - Everest Dainik - News from Nepal
यो वर्षको दसैंलाई ४० अर्ब नयाँ नोट !
काठमाडौं, असोज २ । विगतमा जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी दसैंलाई लक्ष्य गरी ४० अर्ब नयाँ नोट बजारमा पठाउने भएको छ ।
सर्वसाधारणलार्य नयाँ नोट साट्न कसरी सहज हुन्छ भन्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंक अझै छलफलकै क्रममा छ । मुदा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले पाहोर सालकै हाराहारीमा नयाँ नोट सटहीको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।
याे पनि पढ्नुस झनै सस्तियो नेपाली रुपैयाँ; आजसम्मैको सस्तो
पोहोर दसैंमा राष्ट्र बैंकले ४० अर्ब नयाँ नोट बजारमा पठाएको थियो । उनका अनुसार अब २-३ दिनभित्र हुने छलफललले सटही सुरु हुने दिन र तौरतारिका टुंगो लगाउने छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
ट्याग्स: naya note, Nepali currency, Nepali Rupaiya